Tokantrano efatra no lasibatra araka ny tatitra nataon’ny lietnà Tsaratiana Edgar Honoré, kaomandin’ny kaompanian’ny Zandarimaria. Efa voasambotra ny fito lahy ahiana ho nanao ireo fanafihana tany an-toerana, ka nambaran’ny zandary fa avy aty amin’ny 67ha, Isotry sy Antohomadinika ireo olon-dratsy.
I Miadamanjaka no nandalovan’ny jiolahy voalohany ka volamena mitetim-bidy Ar 3 tapitrisa, vilany sy kojakoja an-tokantrano no voaroba. Niampy fanolanana vehivavy tao an-trano nataona jiolahy dimy lahy izany, ny zoma alina. Nafatotr’izy ireo ny mpiambina.
Ny toeram-pivarotana iray eny Ankijanameva, ao Ambatomirahavavy no notafihin’ny jiolahy efa-dahy koa. « Efa tafiditra ny tamboho voalohany voalohany sy nanapaka ny savily tamin’ny varavarana ry zareo. Tonga haingana ny zandary ka tratra ny efa-dahy », hoy ny tompon-trano.
Teo amin’ny fanafihana faharoa dia nanapa-kevitra ny naka alika mpitsongo dia teny Ivato ny zandary nisahana ny raharaha. Niara-nisalahy tamin’ny fanenjehana ireo olon-dratsy ny Zandarimaria sy ny kaomisarian’ny polisy ao Arivonimamo ary lehiben’ny Fampanoavana. Nahomby ny asan’ilay alika mpitsongo dia ka nisy olon-dratsy iray voasambotra. Niampy roa izany omaly.
« Tao amin’ny trano fahefatra, dia tavela teo an-tokontany ny grenady iray sy satroka », hoy i lietnà Tsaratiana Edgar Honoré. Manohy ny fikarohana ny kaomisarian’ny polisy ao an-toerana.